Harlem: Toerana fiantsenana tsara indrindra | Vaovao momba ny dia
116th Street, eo anelanelan'ny Avenue Lexington sy ny Avenue fahatelo
Raha omaly izahay dia nanome torohevitra momba ny toerana hiaviany miantsena any Soho, Androany horesahiko Harlem.
Ny zavatra voalohany mahasarika ny sain'ny manodidina an'i New York malaza dia, araka ny hitanao amin'ny sary, fa ny ankamaroan'ny fivarotana dia misy ny ampahan'ny entana amoron'izy ireo aseho eny an-dalambe toa tsena parasy. Zavatra nanintona ny masoko izany ary nivadika maraina mangina tao Harlem ho maraina fiantsenana.
Afaka manomboka amin'ny làlambe faha-116 ianao, eo anelanelan'ny Lexington Avenue sy ny Third Avenue, amin'ny fantatra amin'ny anarana hoe El Barrio na Espaniola Harlem, faritra atsinanan'i Harlem izay anjakan'ny taranaky Puerto Rico. Ity arabe ity dia tototry ny fivarotana akanjo matetika amin'ny vidiny mirary.
Na izany aza, ao Harlem isika dia mahita karazana magazay hafa ahafahantsika mahita zavatra mahaliana.
Ho an'ireo tia ny mozika ho tian'izy ireo ny hiditra Fivarotana mozika Casa Latina. Ity fivarotana ity, misokatra mandritra ny 45 taona, dia manolotra karazana CD mozika latinina, vinezy vinazo ary zavamaneno maro karazana. Any amin'ny 151 Atsinanana 116th Street no misy azy, tsy maintsy hojerena tsy ho an'ny mozika ihany fa ho an'ny mpiasa ao aminy.
Ho an'ireo izay tia ny boky sy gazety, hankafy izy ireo ao Fivarotam-boky The Blue House. Ity ivon-literatiora ity dia mampiantrano klioba boky, sonian'ny mpanoratra, fampirantiana, fandefasana horonantsary ary atrikasa fanoratana. Na dia ivon-toerana latina aza dia afaka mahita boky amin'ny teny anglisy sy espaniola ianao. Ity fivarotana ity dia eo amin'ny 143 East 103rd Street.
Ary farany fivarotana mahaliana: Botany fotsiny. Any amin'ny 134 Atsinanan'ny 104 eo anelanelan'ny Lexington sy Park Avenue no misy ity fivarotana botaniika Hispanika ity dia mivarotra vokatra ara-panahy mifandraika amin'ny santeria toy ny labozia, sarivongana ara-pivavahana, anana ary menaka. Ny tompony, Jorge Vargas, dia mitarika ireo mpanjifa izay tsy mahalala ireo vokatra ireo.
Fahasamihafana fivarotana sy vokatra very tontolo andro ao amin'ny manodidina an'i Harlem.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » New York » Harlem: Toerana fiantsenana tsara indrindra